Sunmi ရဲ့ Instagram ကို ဘာကြောင့် Fan တွေ Unfollow လုပ်သွားကြတာလဲ…! | News Bar Myanmar
Sunmi ရဲ့ Instagram ကို ဘာကြောင့် Fan တွေ Unfollow လုပ်သွားကြတာလဲ…!
ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့ JTBC ရဲ့ Knowing Brother အစီအစဉ်မှာတော့ Sunmi ဟာ မကြာသေးမီက Instagram မှာ သူမလူ ၅၀၀ လောက် Unfollow တာခံခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
Sunmi ကတော့ ဘာကြောင့် Unfollow ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Knowing Brother ရဲ့ Cast Member တွေကို Quiz အနေနဲ့ မေးခဲ့တာပါ။ အကြောင်း ရင်းကတော့ ရယ်စရာပါပဲ။ အဲ့ဒါကတော့ သူမလူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံကို တင်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါတဲ့။
Sunmi တင်ခဲ့တဲ့ သူကတော့ J.Y.Park ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သိကြတဲ့အတိုင်း Sunmi ဟာ Wonder Girls ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းပါ။ မကြာသေးမီကပဲ JYP Entertainment နဲ့လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့တာပါ။ သို့သော်လည်း J.Y.Park နဲ့ကတော့ အစ်ကိုတစ်ယောက်၊ ဆရာတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ရင်းနှီးနေတုန်းပါပဲ။
တကယ်တော့ Sunmi ဟာ J.Y.Park ရဲ့သီချင်းသစ် Fever ကို အားပေးဖို့အတွက် J.Y.Park ရဲ့ပုံကိုသူမရဲ့ Instagram မှာတင်ခဲ့ပါတာပါ။ ရုတ်တရက်ပဲ သူ့ကို လူ 500 လောက်က Unfollow သွားပါတယ်တဲ့။ ဒါ့ကြောင့် J.Y.Park ကလည်း သူမကို Comment မှာ တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဟာသအနေနဲ့ ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။
Next Rating အမြင့်ဆုံးကိုတက်လာတဲ့ 'Backstreet Rookie' နဲ့ စတင်ပြသချိန်မှာ မျှော်မှန်း rating မရရှိခဲ့တဲ့ 'Train' »
Previous « My Unfamiliar Family ရိုက်ကွင်းကို Coffee Truck ပို့ပေးခဲ့တဲ့ Lee Jong Suk